Falli amma qabnu qabsoo roga maraan itti mudduu dha ! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFalli amma qabnu qabsoo roga maraan itti mudduu dha !
Duraanuu garee hannaa fi saamichaatu (OPDO) ofiin jedhee ijaaramee irraa jijjirama eeguun goyyummaa dha .
Oromoo irratti malee hanga har’atti or amma eenyu fa’ii oromoof Hin dhaabbanne.warri bilsoomneerraa ,jijjiramatu dhufee jedhanii Opdof harka reebaa fi jala fiigaa jiran eenyu ????
warra lafa Magaalaa gurgurachaa turan. warreen jibbamoo kaleessaa Aangoo fi bu’aaf fiigan.
Daasfooraa muraasa alaa galanii qabeenya horateen waa buutuuf fiigu. Warra ABO Hin baraannu qabsoon bosonaa Ni ulfaata jedhanii qabsoo dhaabanii Biyya faranjii tti baqatanii qabeenya horataniin muraasa Amma biyya tti deebi’anii Opdo jala galuun 5 hanga 10 ta’anii maqaa ODF,Abo Ce’umsaa ,Abo Tokkome jedhanii kurfa’uun Aangoo fi bu’aaf Opdo jala hiriiranii Aangoof fiigaa jiran kkf dha.
Ummanni oromoo callisee ilaalaa jira.Tuffachaa fi itti kolfaa jira.Toftaan isaanis kunis moofa’ee irra darbeera.Toftaa wayyaanee ture.Har’a Hin hojjetu.Bor itti salphachuu danda’uu.
Meerre jijjiramni Opdo ? Oromoon kaleessa haarsaa kaffalee deebisanii badii tokko malee jilmaan kaambii waraanaatti dararamuu ? Ajjechaan ,hidhaan Jilmaan akkuma bara wayyaanee oromiyaa guututti deebi’ee itti fufuu ? Oromiyaan waraana moofaa duriin command post jala galuun dararaa cimaa jala galuu ? Yakkamtoonni waggoota 27 guutuu oromoo lafa irraa fixaa fi saamaa turan mirgii fi qabeenya horataniin nagaan Iddoo fe’an jiraachuu ???? Isa kami jijiramni ??
Ilma Abbaa Gadaatu Aangoo qabate callisaa shiftaatu jidhame jechaa jirti Opdo’n .Manni Q/Bulaa gubbachuu ajjeefamuu dhaa jijjiramni ??
EPRDF keessatti Opdo’n maqaa oromoon tokkoon Aangoo yaroof argatee callisaa oromoo jechuu dhaa ? Hin bari’uu seetee manatti …. Jedhan.Walitti damaqnee jirra.Dhiigni Saba keenya dhangala’e bilaasha dhangala’ee Injifannoo bilisummaa harka Diinatti deebi’ee Hin galu. Garuu bara dheereaa calqabee har’as Qerrroo dhugaan qabsa’aa jiru dabalatee Aangoo fi bu’aa dha fiigaa Hin jiran.Hanga gaaffiin oromoo bara dheeraaf itti wareegamee gaafata ture hundeen deebi’uutti qabsoo dhuma irra jiru. ABO fi KFOnis Amma gaaffiin oromoo hundeen deebi’uutti qabsuma irra jiru.
Mootummaan qabsoo Qeerroon maqaa oromoo qabatee Maasaraa minilk seenee waadaa gaaffii oromoo bara dheereaa deebisuuf gale Ganee waan duubatti deebi’ee Aangoo EPRDF /Opdo durii suphee Umurii dheereffachuuf hojjechaa jira.Gara Hayyallaa qileetti gad deemuu calqabeera. Haraarri dhugaa gaggeffamee jarmoolee siyaasaa oromoo ABO fi KFO waliin hijjechuuf Opdo’n fedhii Hin qabdu.Diddes jirti. Inimayyuu isaan of biraatti sodaattee mana hidhaatti guraa jirti .
Ummanni oromoo Mootummaa Jibbamaa,Yakkamaa,dulloomee samee kufaa jiru Obsa waggaa tokkoo booda ummanni keenya harka jalaa fudhatee qabsoo deebisee finiinsuun Opdo Yaroo dhumaaf diigee jarmiyaa dhugaan Saba oromoof qabsaa’an ABO fi KFO wallin hiriiree oromiyaa badii fi Diina keessaa fi Alaa itti aggaamee jiru jalaa “save” godhee ambisee oromooo abbaa
Biyyaa gochuun bilsummaa isaa gonfachiisuudha. Sablamoota biroo Ollaa oromoo ta’anii oromoo waliin biyya ijaarachuu fedhii qaban waliinis biyya ijaarachuu dha.Kan oromoo ijaan arguu Hin feenee fi Ammas oromoo bituu qabna warreen jedhanis oromoo mataa irraa bu’aanii qobaa isaanii jirachuun mirga isaaniiti.
Opdo kufaa jirtu otoo ta’ee eeguu qabsoo oromoo dhiigaan sadarkaa olaanaa irra gahe deebee harka diinaa akka Hin galle oromoon tokkummaa isaa daran cimsuun bilisummaa wareegamaafii ture mirkaneeffachuun beellama Hin barbaachisu . Qabsoo Haarsaa guddaa ilmaan oromoon kaffalamee jijjirama xiqqoo yaroof dhufe Galma yaadameen gahuuf Rakkoo Amma jiru walii tumsuun otoo biyyi kun Diigamu keessa Hin galiin ce’umsa kana fiixaan baafnee filannoo dhugaan haa gaggeeffamu jedhee Qeerroo fi qarreen mee Ni ilaalla jedhee yaroof obesee callise.
Jaarmiyooleen ciccimoon Siyaasaa oromoo deeggaraa ummataa qabanis kanuma deeggaranii oromoon waltakaaluu irra carraa jiru itti fayyadamuu wayya jedhanii callisanii jiru.
Kuni Garuu Opdo biratti/Dr Abiy/biratti tuffii ta’ee jira.
Injifannoo oromoon asiin gahee fiixaan baasuu otoo Hin taane “Xoophummaa” wayya jechuun G-7 fa’aa gargaaree Maqaa Dhaaba oromoo jedhu jigsuuf waadaa galee irratti hojjechaa jira. Gama Opdo’n Garuu Callisuu qabsoo Qeerroo akka waan Qeerroon kufee ykn Opdo kayyoo Hin qabnee jala galee tti ilaalaa jiru. Dr Abiy Tv gubbaa lallabeef Opdo ofitti fudhatee miti.
Qabsoon Qeerroo deebi’ee itti fufa.Yoo deebi’ee itti fufe Garuu akkuma kana duraa hiriira baanee galuu otoo Hin taanee Qeerroon Kabinoota fi Basaastota Opdo deebiftee Qeerroo fi qabsa’oota oromoo mana hidhaatti guraa jirtu target gochuun oromiyaa keessaa Yaroo dhumaaf ishii diiguu ta’a.
Kanaafis Kabinoota Opdo gorsinee dadhabne.Badii durii irraa Ammas deebi’uu didan.
Kanaafuu Adeemsi Opdo shira xaxaa Tplf irraa horteen deebiftee Qeerroo,Qabsaa’ootadhugaa fi oromiyaa irraan irra deebiii Mootummaa EPRDF /Opdo’n maqaa oolaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun miidhaa ilmaan oromoo irra gahaa jiru jalaa baanee injifachuuf qabsoo Qeerroo fi qarree finiinsuun qofti furmaata ta’ee jira. Ni dandeenya ! Itti muddi Qeerroo qabsoo ke olola Opdon Hin moofaksmiin ! Kunoo Adeemsa Opdo arginee jirra .
Qabsoo dhiigaan asiin geenye Diinatti kenninee karaa irratti gannee Diina deebifnee mirga Hin kadhanu. Tokkummaan qabsoofne bilisummaa oromoo Injifannoon haa goolabnu !!